Ikhaya - pano.city Marketing GmbH
lapha.city Marketing GmbH
Inxusa Ledolobha 2.0
Brand and design ngokuvumelana
Kusukela ngo-2014 besilokhu senza umsebenzi wokuphayona kumakhasimende ethu ngaphansi kwesiqubulo esithi "product meet met design". Sakha izikhumbuzo, izihlokwana nezindatshana zabalandeli zohlobo olukhethekile kusuka ezintweni zansuku zonke.
Zonke jute for 2020
Uyamfuna esimeme futhi kahle imikhiqizo ethengisiwe? Manje sethula uhlu lwethu olusha lomkhiqizo futhi siqala ngezindatshana ezingaphezu kuka-150. Izikhwama ze-jute, i-gymbags, izinkomishi nokuningi, amanxusa ethu amadolobha agxilile akhuthaza ngokuqwashisa ngemvelo nangekhwalithi ephezulu. Zonke izindatshana zingahlanzwa ngawodwana nge-motif noma logo.
Siyajabula ukwethula kini amadizayini wethu we-City Ambadors 2.0, athuthukiswe ngokukhethekile amadolobha nokumaketha kwedolobha, futhi sethemba ukuthi uyakujabulela ukubhekabheka nokuthola!
Umuntu ngamunye njengohlobo lwakho lomkhiqizo
Ngabe ufuna izambulela? Manje usungathola lonke ulwazi olumayelana nobubanzi bethu kusuka kusambulela sokukhangisa zakudala kuya kusambulela se-motifla esivelayo lapha.
Bonisa konkeizambulelaizesekeliizinkomishiukudla okunoshukela
NgoMsombuluko - uLwesihlanu kusuka ngo-08 ekuseni kuya ku-00 p.m.
I-M & M iyodwa
Ama-Cups, ama-mugs namabhodlela